अन्तत: ओलीले चाले यस्तो ठुलो कदम, एक्कासी यस्तो निर्णय गरेपछि नेता कार्यकर्ता नै चकित — Sanchar Kendra
१अब हिमाल डेन्टल हस्पिटलको शाखा साँखुमा पनि, २४ सैं घण्टा गुणस्तरीय मुख तथा दन्त सेवा
२यी हुन् मुख्यमन्त्री शेरधन राईकी हुनेवाली ‍दुलही, नाम र तस्विरसहित
३दाङ पुगेर माधव नेपालले गरे प्रचण्डकाे प्रशंसा
४केपी ओलीको नाम खड्गप्रसाद ओली होइन, कीर्तेप्रसाद ओली हो- गगन थापा
५कोरोना संक्रमण बढेपछि लगाइयो अन्तर्राष्ट्रिय यात्रामा प्रतिबन्ध
६माथिबाट खसेको ढुङ्गा छल्न खोज्दा भिरबाट लडे प्रहरी हवल्दार, उपचार गर्दागर्दै मृत्यु
७नेकपा नेता कञ्चनलाई तत्काल रिहा गर्न जनप्रगतिशिल मोर्चा कुवेतको माग, विज्ञप्तिसहित
८बिहे गर्दै मुख्यमन्त्री शेरधन राई, बाहिरियो विवाहको मिति, को हुन् दुलही ?
९ओलीलाई २५ लाख बिगाे भराउने फैसला, यति गम्भीर छ कसुर
१०दीपक मनाङेलाई वामदेव गौतमले फोन गरेर त्यस्तो के भने ? रहस्य थाहा पाएर ओली-प्रचण्ड समेत चकित
११काठमाडौँका यी २१ स्थानमा आज बिजुली काटिने, जारी भयो सूचना
१२चितवनमा कृषि-पर्यटन क्षेत्रमा मौसमको पूर्व सूचना दिने प्रणालीको तयारी
काठमाडौँ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा को सचिवालय बैठक आज पनि बस्दैछ। बैठक आज दिउँसो १ बजेलाई बोलाइएको छ । तर आजको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने अनुसस्थित हुने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
हिजोको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले बैठक अब १० दिन स्थगित गर्न भनेपनि अन्य सचिवालय सदस्य अनौपचारिक र औपचारिक छलफलका लागि बैठक बस्नुपर्ने बताएपछि कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज एक बजेका लागि बैठक बोलाएका हुन् ।
ओलीलाई माधव नेपालको कडा चेतावनी- पूर्वएमाले एकातिर हुन्छ भन्ने कल्पना नगरे हुन्छ
यो पार्टी फुटाउने भन्ने को ? पार्टी फुट्छ भनेर तर्साउने को ? भन्दै नेता नेपालले बैठकमा प्रश्न गरे । उनले भने, ‘पार्टी फुट्छ अनि एमाले एकातिर माओवादी अर्कातिर हुन्छ भन्ने नसोचे हुन्छ । त्यस्ताे कल्पना नगरे हुन्छ ।’ पूर्वमाओवादी र पूर्वएमालेबीच भएको पार्टी एकता दुई अध्यक्षबीचको एकता नभएको नेता नेपालले बताए ।
‘के हिजो माले र मार्क्सवादीबीचको एकता मदन भण्डारी र मनमोहनबीचको एकता थियो ? त्यो कसको एकता थियो ?’ बैठकमा नेता नेपालले भने, पार्टीले कसैलाई जिम्मा दिन्छ र त्यसैका आधारमा एकता हुन्छ । एकता भइसकेपछि पार्टी विधान र प्रतिवेदनका आाधरमा चल्छ, अहिले नेकपामा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी भन्ने नै छैन, विघटन भइसक्यो ।’